Al-shabaab oo waxba kama jiraan ku tilmaamtay warkii ka soo baxay NISA. – XAMAR POST
Al-shabaab oo waxba kama jiraan ku tilmaamtay warkii ka soo baxay NISA.
War ka soo baxay Al-Shabaab ayaa waxba kama jiraan waxaa ay ku tilmaameen warkii xalay ka soo baxay hay’adda nabad sugida iyo Sirdoonka Qaranka ee NISA oo ay ku sheegeen in Al-shabaab beegsan rabaan madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farnaajo iyo Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
Sidoo kale Al-shabaab ayaa waxaa ay iska fogeeyeen inuu kooxdooda ka tirsan yahay nin lagu Magacaabo Maxamed Maahir oo ay Hay’adda NISA sheegtay inuu yahay ninka doonayo inuu isku qarxiyo Madaxda ugu sareysa ee Dalka.
Sarkaal katirsan Al-Shabaab oo la hadlay warbaahinta ku hadasha Afkooda ayaa sidoo kale sheegay in aysan hay’adda NISA ogaan karin xogta ku saabsan qorshayaasha Al-shabaab ee la xiriira dilalka iyo qaraxyada mas’uuliyiinta dowladda, balse warkii xalay uu yahay mid muujinaya in NISA shirqool la beegsan rabto madax sare oo khilaaf kala dhexeeyo.
Waa warbixintii labaad oo Hay’adda NISA soo saarto oo Al-shabaab ay beeniyaan, waxaa ay horey isaga fogeeyeen dil ay NISA sheegtay in ay Al-shabaab u geysteen sarkaal NISA ka tirsaneed oo lagu magacaabi jiray Ikraan Tahliil.
Beesha Caalamka oo war ka soo saartay arrimaha Doorashooyinka